Isi eji eji igwefoto eji eme ihe - OMG Solutions
Uszọ Ejiri Igwefoto -Corn Player
BWCs na-edekọ ngwaọrụ echekwara ka a yikwasị ya na uwe onye ọrụ ikike, nke nwere ike itinye iko ma ọ bụ mkpuchi mkpuchi. Ha na-enye usoro mgbasa ozi sara mbara nke oge site n'aka onye ọrụ ka ndị isi na-abịakwute ọrụ ha kwa ụbọchị. Foto ndị dị elu dị elu na-echebara echiche na-enweghị mgbagha banyere ndị mmadụ ma dabara adaba na mmemme mmemme vidiyo, dịka ọmụmaatụ, ihu ihu. Amplifiers nwere ike ịdị nhịahụ iji jide ọ bụghị naanị ụda metụtara ọnọdụ a na-elekwasị anya mana na mgbakwunye gbakwunye ụda nke nwere ike itinye mkparịta ụka nke ndị na-ahụ ihe.
Ihe ohuru nke BWC na ekwu okwu banyere ihe di egwu site na nmalite nke ese foto, mgbe CCTV kpuchie ya dika iwu nke nabatara ma nwee ike idekọ foto ma ghara ikwuputa. N'ime oge ahụ, ebe ọrụ nlekọta nchebe dị iche iche nke Canada nyere iwu nyocha vidiyo maka ngalaba a na-emeghe, bụ nke a na-eche na njedebe nke akụkọ a. Ọ bụ ezie na ụkpụrụ nchekwa dị mkpa n'ihe nkiri vidio na-aga n'ihu dịka ọ dị na mbụ, ụwa dị ugbu a karịa ka ọ dị mgbagwoju anya. Ka nchọpụta na-etolite, a na-achịkọta oke data nke data ọ bụla (ma vidiyo ma ụda) na ọnọdụ dịgasị iche iche (ma nke a na-ebugharị ma nke nwere ike ibugharị) yana ikike nke ijikọ yana data ndị ọzọ (dịka ọmụmaatụ ihu ihu, metadata). Ọ bụ ihe ezi uche dị na LEA ga-eche echiche banyere iji ihe ọhụụ ọhụrụ enyere ha aka n'ịrụ ọrụ dịịrị ha. N’out oge, agbanyeghị, ihe ọhụrụ BWC na-egosi ezigbo nsogbu maka ikike mmadụ nwere ichedo ya. Anyi na-anabata na ilebanye anya na nche nke nche site na mbido nwere ike ime ka eme tozuru oke kwesiri ekwesi n'etiti mmezu iwu na ikike nchedo ndi mmadu.
A gha enwerịrị igosipụta arụmọrụ nke BWC ga-edozi. Kedu mkpa ọrụ LEA nwere maka BWCs bụ azịza?
Ekwesighi inweta BWCs nnoo site na eziokwu ahụ bụ na enwere ike ilele ha anya dị ka ihe ama ama chọrọ. Ekwesịrị ka ekpee ha ikpe dị mkpa iji dozie ọnọdụ arụmọrụ doro anya na mpaghara ha zigara ha.
Ndi BWC nwere ike ibu azịza ghaara nke oma maka odi oru ndi apuru iche? LEA kwesịrị ịma banyere ihe mgbochi nke ihe ọmụmụ. Akụkụ nke ihe nwere ike mee site na igwefoto, ihe ndekọ nwere ike ịbụ ezughi oke n'ihi oke ọgba aghara ma ọ bụ ntọala, ma ọ bụ mmejọ mmadụ nwere ike ịmegharị aka aka nke akụkọ wee belata ogo ha. N’aka ohere a na-ezubere iji ihe ndekọ dị ka ihe akaebe n’usoro ụlọ ikpe, LEA kwesịrị ịtụle ihe ga-eme n’ihu ndị recognizedlọikpe ghọtara maka ịnagide akụkọ dị ka ihe akaebe dị ka nnata na nnabata na usoro mmezi echepụtara iji gosi na ihe ndị ahụ adịghị emezu.
Obi abụọ adịghị ya, itinye n'ọrụ nke BWC ga-eweta nchekwa furu efu ebe ọ bụ na ihe ndị mmadụ na-eme na mkparịta ụka na-echebe nchebe obtrusive. Ya mere, nkwụsị nkwụsị ọ bụla ga-abụrịrị na ogo a pụrụ ichetụ n'echiche ma kwenye site na uru dị ịrịba ama na nke a pụrụ ịkọwapụta. N'ihe ohuru ohuru, o nwere ike isiri ike ikwu ihe di iche na ihe ojoo na ihe ojoo maka ihe ndi choro kwa ubochi na ntaneti a na-aru oru. Ertmepụta atụmatụ ọkwọ ụgbọ ala bụ nke edepụtara nke ọma dị ka usoro nnabata maka ịtụle mmetụta nchekwa nke BWC n'ihe metụtara uru ha, tupu ịhọrọ ma ọ ga-eziga ha ma ọ bụ na ọ gaghị eziga ha, kedu oke, na ọnọdụ ndị a.
Kwesịrị ịtụle nchebe ndị ọrụ n'otu aka ahụ. BWC nwere ike ijide ndị na-ahụ maka ikike iwu 'nso data ụlọ, nke a na-ahụ n'okpuru iwu kachasị nchebe mpaghara. Mpaghara nwere ike itinye aka na itinye BWC akaụntụ iji nyere ndị ọrụ aka nyocha. Ndị nnọchi anya nwere ike n'otu aka ahụ nwee ikike nchebe n'okpuru iwu dị iche iche na ngụkọta nghọta nwere ike imetụta mmemme BWC.
Onwepu ohere nke iji ihe ndekọ edeghaara maka ebumnuche obula nke bara uru na mmemme BWC, dịka ọmụmaatụ, ịkwadebe ndị ọrụ, nyocha, ma ọ bụ nyocha atụmatụ, ekwesịrị ịtụle ebumnuche inyeaka a iji mesie ike na ntinye akwụkwọ. Ndi nnochite anya kwesiri inwe mmuta maka ha. N'otu aka ahụ, ekwesịrị idobe usoro iji mee ka nchedo nchedo kpuchido, dịka ọmụmaatụ, izochi ọtụtụ anya na ihe ọ bụla na-emetụta, yana iji akụkọ ndị nwere mmetụta chekwaa.
Ntụgharị uche n'ime ihe omume BWC dị mgbagwoju anya, a na-ekwenyekwa ọrụ ndị ọkwọ ụgbọ mmiri dị ka ihe dị mkpa iji nabata nnabata ndị mmadụ. Ọ bụ omume kachasị mma mgbe ị na-ezipụ mmegharị ọhụụ, inye ha ogbugba n'ọhịa na mpaghara amachiri. Na ohere gbanyụọ nke LEA ahọrọ na ịnabata BWCs dabara, ọrụ ụgbọelu ga-egosipụta etu ndị BWC si arụ ọrụ n'ọnọdụ ha kpọmkwem yana ma ihe ọhụụ a na-arụpụta ihe enyemaka na-emezu ebumnuche mmemme ahụ. Pilọ ọrụ ndị na-anya ụgbọelu nwere ike ịkụziri ihe banyere imepụta usoro a na-enweghị ike ịkọwapụta, ihe ndị dị mkpa iji kwado ya, yana nlekọta.
Ofzọ ịtụgharị uche BWC, tinyere ebumnuche mmemme na mkpa ọrụ.
Ndị ọkachamara nhazi maka ịchịkọta data nkeonwe n'okpuru usoro ihe omume a.
Ọrụ na ọrụ nke ndị ọrụ dabere na BWCs na akụkọ ha.
Etubere maka ịtọghe ndekọ ndekọ na-enweghị ngwụcha yana ịgbanye BWCs yana ịgbanyụ, dị ka ndị dị mkpa.
Ndokwa maka ntuziaka maka ọrụ yana ịkwadebe maka ndị nnọchi anya na-ekwe nkwa na ndị isi ga-aghọrị usoro nchekwa nke BWC ma mara ọrụ ha n'okpuru usoro na usoro ndị a.
Nkwusi mkpuchi nchekwa nke ndị nnọchi anya nke BWC jidere data nkeonwe ya.
Inye oke maka ikwe nkwa na usoro BWC ga - agbaso, onye nwere nnukwu ọrụ dị n'aka onye isi otu ahụ.
Nsonaazụ nke anabataghị usoro na usoro.
Ndi mmadu ikike ime atumatu. Ndị mmadụ kwesịrị ịkụziri ha na ha debere ihe ùgwù iji nyefee ndị nlekọta nchekwa LEA ajụjụ gbasara nchịkwa nke akụkọ ihe mere eme nwere ozi nke mmadụ iji kpebie ma ọ bụrụ na nkwụsị nke iwu nchedo emeela.
Mkpa nkwekọrịta ọ bụla n'etiti LEA na ndị otu ọkachamara pụrụ iche na-ekpebi na ihe ndị mere n'ime ha na-ejide LEAs ma dabere n'iwu iwu nchekwa.
Ndokwa maka nyocha nke omume nke mmemme BWC iji ledo anya na usoro, atụmatụ, na iwu nchekwa ihe onwunwe. Nyocha ahụ kwesịrị ịgụnye nyocha nke ma ihe nyocha BWC ga-akwụsi ike n'ihi ebumnuche ndị ebuputara na mmemme ahụ.
Na ntinye site na usoro PIA, nhazi maka ndi PIA n’uche obula enwere mgbanwe di nkpa na atumatu a.
Aha na kọntaktị data nke onye nwere ike imeghachi omume na ase site na izugbe.
Jiri na ngosipụta nke ndekọ
Ọnọdụ nke nwere ike ịhụ ụbọchị. Nchoputa ahu kwesiri happen gha eme n a ulo a. N'ọnọdụ na-enweghị obi abụọ ọ bụla nke mpụ emeela ma ọ nweghị ekwupụta na o mere ihe ọjọọ, ekwesighi ịhụ ụbọchị.
Ebumnuche nke enwere ike itinye akaụntụ na ọnọdụ ọ bụla na-egbochi ma ọ bụ njirisi, dịka ọmụmaatụ, na-egbochi ihe na-adịghị mma site na akụkọ ihe mere eme iji kwadebe ebumnuche.
Akọwapụta oke na ojiji nke vidiyo na nyocha dị mma.
Ọnọdụ a ga-ekpughere ndị mmadụ akụkọ ihe niile, na-ewere nke ọ bụla, yana usoro maka mkpughe dị otú ahụ. Iji maa atụ, a ga-ekpudo ihu na ịmata njiri mara nke ndị na-apụ apụ ma belata ụda olu na ohere ọ bụla o kwere omume.
Ọnọdụ ndị a ga-ekpughere akụkọ ndị dị na mpụga, dịka ọmụmaatụ, n'ọfịs ndị ọzọ gọọmentị na nyocha ọrụ, ma ọ bụ ndị nnọchite anya iwu dị ka akụkụ nke usoro mkpughe ụlọ ikpe.
Nchedo na nzaghachi maka mmebi:
Ejiri nchekwa nchebe ejiri mee ihe na-ekwe nkwa na anaghị enweta akaụntụ ma ọ bụ gbanwee n'ụzọ na-ekwesịghị ekwesị.
Ngwa maka ijikwa oge ezumike ọ bụla nke na-enweta data nke onwe onye n'enweghị nkwenye ma ọ bụ ekpughere na mmegide nke iwu nchedo dị mkpa.
Inweta na ndekọ ndị
Usoro iji meghachi omume na nchọta maka ịnweta akụkọ ihe mere eme, gụnyere ịnweta data onye ọ bụla na ịnweta data chọrọ n'okpuru ohere nke iwu data, dịka ndị mmadụ na-arịọ maka mgbapụta nke data nke ha. Nke a gụnyere aha na data kọntaktị nke onye onye chọrọ ụdị nnweta ahụ kwesịrị ijikọtara ya.
Njide na mbibi nke ndekọ:
Oge njigide na ndenye
Okwesiri ka eme ka ndi mmadu biaruo ndi mmadu aka ime ka ha di mfe. Igosipụta ihe emeghe na usoro na usoro dị adị na ndị isi na-ahụ maka ịgha ha bụ ihe dị mkpa iji kwenye na ikike nchekwa ndị mmadụ dị
enen zuru ezu. Ihe odide a kwesịrị igosipụta ihe ngosi nke ajụjụ mmekọrịta na nkwenye dị ka nghọta nghọta nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
BWCs na-edekọ ọ bụghị naanị ọrụ na okwu mmadụ, mana mgbakwunye na mmekọrịta ndị mmadụ na ndị ọzọ n'ime ọsọ ọsọ, gụnyere ndị enyi, ndị ikwu, ndị na-ekiri ekiri, na-erigbu ndị mmadụ na ndị a na-enyo enyo. Ihe ndekọ nke ndị mmadụ na-eji BWC na-ebuli ihe egwu dị egwu maka nchebe dị egwu, na LEAs ga-elekwasị anya na izipu BWCs na ogo na n'ụzọ na-ele ma hụ na ikike nke ndị mmadụ na ndị ọrụ nwere nchebe onwe onye.